July 18, 2018 २ श्रावण २०७५
एमाले सिध्याउन माओवादीलाई बोकेर हिंडे कांग्रेस नै सकिन्छ
Wednesday,6Sep, 2017 3:10 PM
पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको र नेपाली कांग्रेसको विदेश विभाग प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको नेता हुनुहुन्छ । आफूलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग राख्ने स्वाभावकी कोइराला अहिले कांग्रेसले आफ्नो नीति, सिद्धान्त नै छोडेर माओवादीसँग तालमेल गरेकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ । कांग्रेस प्रभावशाली नेता कोइरालासँग चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरेको कुराकानीः
देशमा निर्वाचनको माहौल छ, कांग्रेसको चुनावी तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचनमा पार्टी जाँदै छ । पार्टीबाट कस्तो व्यक्तिलाई टिकट दिइएको छ, धेरै कुरा त्यसले निर्भर गर्छ । नेतृत्वले एकपक्षीय गर्यो भने राम्रो रिजल्ट आउँदैन ।
ओलीजीको सरकार ढाल्नु हुँदैन, राष्ट्रिय एकता, सहमति र मेलमिलापको बाटो हिंड्नु पर्दछ भनेँ । त्यो कुरा कसरी गल्ती भयो ? त्यो कुरा अहिले प्रमाणित भएन ? राजाले गलामा फाँसीको फन्दा हाल्दा त बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभयो । देश बचाउनको लागि, आफनो पार्टी बचाउनको लागि, आफ्नो सिद्धान्त बचाउनको लागि अलि क्लेभर र स्याक्रिफाइस पनि गर्न सक्नु पर्यो । त्यसमा के मैले के गल्ती बोलेँ ? ठीक बोलेको छु ।
टिकट वितरण नेतृत्वमा बस्नेले एकपक्षीय रुपमा गरेको छ भन्न खोज्नु भएको ?
अब त्यो अझै हेर्न बाँकी छ, म त भन्न भन्दिनँ । साथीहरुले भन्दा चाहिँ अली पक्षपात भएको छ भन्छन् । त्यो भएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले धेरै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले बार बार त्यो म्यासेज दिइरहेका थियौं । जस्तो अब पार्टीभित्र गुट छ, उपगुट छ, धेरै गुटहरु छन् । यता एकदम बलियो गु्रप छ । जुन पहिल्यै देखिन् चुनाब लड्दै आईरहेको, गिरिजाबाबुको पालादेखिन् । बीपी र गिरिजाबाबुको विचारलाई अगाडी बढाउने जुन एउटा ठूलो समुदाय छ उनीहरुलाई माइनस गरेको हो कि भन्ने फिल भईरहेको छ ।
भनेपछि नेतृत्वले कांग्रेसको ओरिजिनल विचारलाई समेट्न सकेन भन्ने हो ?
हो, त्यो ग्रुप जुन बीपी र गिरिजाबाबुको धारलाई बोकेर हिंडेको छ । जुन ग्रुप देशभरी छ र कांग्रेसको आस्था बोकेको विचारको मूल ग्रुप हो । पार्टीको विचारलाई लिएर हिंड्ने त्यो समूहलाई कमजोर पार्ने, त्यो समूहलाई बाहिर राख्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ कांग्रेसको राम्रो नतिजा आउँदैन । किनभने तराईका जनताले पनि कांग्रेस भनेर त्यही धारलाई मानेको हो । बीपी र गिरिजाबाबुको जुन विचार छ, तराईमा पनि त्यो विचारलाई बेवास्ता गरेर जाँदा समस्या आउँछ । यो विचारलाई मान्ने गु्रप नै त्यहाँ बलियो छ । त्यसैले उनीहरुलाई समेटेर लिएर नगए पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ, एकदम स्पष्ट छ ।
कांग्रेसलाई किन माओवादी चाहियो ? के कारण हो ? यो एकदम शंकाजनक छ । आफ्नो विचार छोडेर माओवादीसँग के हो यो ? माओवादीलाई किन तराईमा नेपाली कांग्रेसले यत्रो मरिमेटी गरिकन स्ट्याबलिष्ट गर्न खोजेको ? तपाईंहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईंहरुले छानविन गर्नुस्, के कारण कांग्रेसले आफ्नो बाटो छोडेर हिंड्यो ?
क्ेही समय अगाडि तपाईं, महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला जस्ता कोइराला विरासतसँग गासिनुभएका नेताहरु बैठक बस्नुभयो नि, त्यसले के म्यासेज बाहिर ल्याउन खोज्नुभएको हो ?
हैन, हामीहरु कहिल्यै पनि नमिलेको हैन । तर हामी मिल्दा पार्टी बलियो हुन्छ । कांग्रेसको यो एउटा धार बलियो हुन्छ भनेर त्यसलाई फुटाउने टुटाउने धेरै प्रयास भएको छ । हामी एक हुँदा त्यसलाई टुटाउने फुटाउने जसले प्रयास गरेको छ, उनीहरुलाई पनि यो फुटाएर त फाइदा छैन । जब उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ टुटाउने फुटाउने गर्छन्, जब उनीहरुलाई फाईदा हुँदैन तब मिलाउने कोसिस गर्छन् । त्यसैले हामी कसैको लागि मिल्ने होइन । कुनै पनि शक्तिको लागि हामी तीनजना मिल्ने होइन । जनता र देशको लागि मिल्ने हो । बीपी र गिरिजाबाबुको जुन विचार छ । त्यो विचारलाई मानेर नेपाली कांग्रेस जहिल्यै पनि बहुमतमा रह्यो, प्रजातन्त्रको पक्षमा रह्यो र जनताको पक्षमा रह्यो । त्यस्तो हुँदासम्म कांग्रेस जहिले पनि बलियो थियो । जव त्यो विचारलाई कमजोर पारियो नेपाली कांग्रेस पनि कमजोर भयो । हामी तीनजना पहिले पनि मिलेका थियौं, नमिलेको हैन । तर, त्यो विचारलाई कमजोर पार्ने प्रयास हुँदा अझ मिल्नु पर्ने हुन्छ । हामीले लन्च र डिनर धेरैचोटी गरेका छौं, त्यो कहिल्यै न्युजमा आएन । अहिले हामी तीनजनाले लन्च गर्दा त्यत्रो धुनचक्र मच्चाउनु पर्ने पनि केही थिएन । किनभने त्यो सबै गराइएको हो । हामी तीनजनाले भेट्दा के के न भयो भनेर सब नाटकीय बनाउन खोजियो । हामी मिल्छौं, मिलेकै कुरा हो । देश र जनताको पक्षमा मिल्छौं । अरु कसैका लागि मिल्नु पर्ने हो भने, सरी हामी कसैको लागि केही गर्न सक्दैनौंै । कसैको फाइदाको लागि मिल्नुपर्छ भन्यो भने म त मान्दिनँ । म तब मिल्छु, बीपीको बिचार जुन गिरिजाबाबुले लिएर हिडेको हो, त्यो विचार लिएर हिंड्ने हो र जनतालाको हितमा काम गर्ने हो भने ।
बीपी र गिरिजाबाबुले अगाडि सार्नुभएका विचारमाथि अहिले चुनौती खडा भएको महसुस गर्नुभएको हो र ?
हेर्नुस्, बीपीको विचारलाई सिध्याउने ठूलो प्रयास भएको छ । म त्यो विचारका पक्षमा उभिएकाले मलाई धेरै ठूलो चुनौती छ । बीपीको विचार हो । गिरिजाबाबुले त्यसलाई अगाडि बढाएको हो । गिरिजाबाबु हुनुहुन्न तर, अहिले आएर गिरिजाबाबुलाई नै सिध्याउने एउटा ठूलो प्रयास छ । त्यो प्रयास पार्टी भित्रैबाट छ । त्यसको मतियार मलाई पनि बनाउन खोजिएको छ । आज म माथि ठूलो अट्याक भएको छ, सबैलाई थाहै छ । त्यो मैले भन्नै पर्दैन । यो सबै पचहत्तरै जिल्लाले बुझेको छ । कांग्रेसमा बीपीको विचार र गिरिजाबाबुले अघि सारेको मान्यतालाई कमजोर पार्न म माथि प्रहार भइरहेको छ । त्यस्तै गर्दै जाने हो भने पार्टी पनि कमजोर हुन्छ, देश पनि कमजोर हुन्छ र प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा प्रजातन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तपाईंले माओवादीसँग पार्टीको हिमचिम र तालमेललाई संकेत गर्न खोज्नु भएको हो ?
हो, कांग्रेसले त्यो बिलकुलै गलत कुरा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस आफैंले जित्न सक्ने पार्टी हो, आफ्नै बल बुताले बनेको पार्टी हो, यसको नीति छ, आफनै क्यापासिटी छ । कांग्रेसलाई किन माओवादी चाहियो ? के कारण हो ? यो एकदम शंकाजनक छ । आफ्नो विचार छोडेर माओवादीसँग के हो यो ? माओवादीलाई किन तराईमा नेपाली कांग्रेसले यत्रो मरिमेटी गरिकन स्ट्याबलिष्ट गर्न खोजेको ? तपाईंहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईंहरुले छानविन गर्नुस्, के कारण कांग्रेसले आफ्नो बाटो छोडेर हिंड्यो ? म अहिले चुनावको बेला केही पनि बोल्दिनँ । यो चुनाव सकियोस्, मेरो आफनै धारणा छ त्यसपछि बोलौंला । म आफूमाथि आक्रमण हुँदा पनि खपेर कांग्रेसले लिएको गलत बाटोका बारेमा केही नबोली बसेको छु ।
तपाईंमाथि आक्रमण भयो भन्नुभयो, कस्तो आक्रमण भयो तपाईंमाथि ?
ममाथि जहिल्यै आक्रमण भइरहेको छ । गिरिजाबाबुको छोरी भएर म माथि आक्रमण भइरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा उहाँको संगठन बलियो छ । कांग्रेसको संगठन छ भने उहाँले बनाएको संगठन मात्रै छ । म जिल्ला जिल्ला गएर हेर्छु गिरिजाबाबु मरेर पनि बाँचिरहनु भएको रहेछ । पार्टी भित्रैबाट प्रहार भईरहेको छ, बाहिरको त छोडिदिनुस् । पार्टीले आक्रमण गरिरहेको छ त्यसको भोगी म पनि भइरहेको छु । यो चुनाव सकियोस् अनि म बोल्छु । अब मलाई कसैसँग डर पनि छैन । न कसैसँग लेना छ, न देना छ । त्यसैले मलाई कुनै डर छैन । फरबार्ड बोलेको छु, म कुनै झुट बोल्दिनँ ।
यसरी माओवादीसँग मिलेर हिंड्नु पर्ने कति कमजोर भएछौं त हामी ? एमालेलाई एक्ल्याउने, एमालेलाई सिध्याउने भन्या छ । एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो यो रणनीति ? यसले त एमाले बलियो हुन्छ । यसले नेपाली कांग्रेस सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले यति पनि बुझेको छैन ? यति पनि सेन्स नभए के राजनीति गर्नु ?
तपाईले पार्टीको लाइन भन्दा विपरित बोलेर पो आक्रमण भएको हो कि ? तपाईले केपी ओलीको सरकार ढाल्नु गल्ती हो भनेर एकपटक भन्नुभएको थियो । पार्टीले नयाँ गठबन्धन बनाइराखेको समयमा यस्तो बोल्नु हुँदैन भनेको हो कि पार्टीले ?
मैले कसरी त्यो कुरा गलत बोलेँ ? केपी ओलीको सरकार ढाल्यो भनेदेखिन् देशमा अस्थिरता आउँछ विदेशीले खेल्छन् भनेको हो । ओलीको सरकार ढाल्नु हुँदैन, अहिले मिलेर जानुपर्दछ, राष्ट्रिय एकता सहमति मेलमिलाप गर्नु पर्दछ भनेको हो । त्यो कुरा कसरी गल्ती भयो ? त्यो कुरा अहिले प्रमाणित भएन र ? राजाले गलामा फाँसीको फन्दा हाल्दा त बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुभयो । ट्याक्टफुल हुनुपर्यो नि पार्टी । देश बचाउनको लागि, आफनो पार्टी बचाउनको लागि, आफ्नो सिद्धान्त बचाउनको लागि अलि क्लेभर र स्याक्रिफाइस पनि गर्न सक्नु पर्यो । त्यसमा के मैले के गल्ती बोलेँ ? ठीक बोलेको छु । अहिले पनि त्यही भन्छु म । केपी ओलीको सरकार ढाल्दा त्यसबेला त्यो गल्ती भएकै छ । त्यसपछि अस्तिरथा आयो । त्यो सरकार ढाल्ने बितिक्कै अस्थिरता आयो । कहिलेकाहिँ दुई स्टेप पछि हट्दा तपाईंलाई बढी फाईदा हुन सक्छ । जहिल्यै पनि अगाडि जान्छु भन्दा फेरि तपार्इं तल झर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो बोल्दा मैले के गल्ती गरेँ ? मैले एकदम ठीक बोलेको छु । राइट टाईमामा राइट बोलेको छु । धेरैले मलाई भनिरहेका छन्– तपार्इंले ठीक भन्नुभयो । ल हेर्नुस् ओलीको सरकार ढालेपछि कति अस्थिरता आयो ? त्यसपछि के के भएन ? कसको लागि सरकार ढालेको ? नेपाली जनताको लागि ढालेको हो भने त औचित्य पुष्टि हुनु परेन ?
केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ तपाईंले किन यति धेरै प्रसंशा गनुभएको ?
मैले प्रशंसा गर्या होइन । केपी ओलीले मात्रै काम गर्न सक्छन्, हामीले गर्न सक्दैनौं भन्या होइन । काम त गर्नुपर्यो नि । कांग्रेसले पनि काम गर्या थियो । मान्छे सहि ठाउँमा आयो भने काम त गर्दाे रहेछ नि । कांग्रेसले पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ यतिकै बीपी भनेर त हुँदैन नि । खाली बीपीको जन्मदिन मनाएर त मान्छे प्रभावित हुँदैनन् । बीपीलाई भजाएर, भजन गाएर पार्टी अगाडि बढ्दैन नि । विकास हुनु पर्यो । विकास गर्ने के छ त भिजनहरु त्यो दिनु पर्यो । हामीले अब विकासको कुरा गर्ने हो । अब विकासलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो । काम नपाएको जस्तो गर्ने होइन । अलिकता त हुनु पर्यो नि बौद्धिकता पार्टीमा पनि ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा बोलेका कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हैन, अहिले म धेरै बोल्दिन । चुनाव छ, धेरै बोल्दा पार्टीलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने आरोप लगाउँछन् । चुनावपछि धेरै बोलौंला । चुनावको रिजल्ट हेर्नुस् कस्तो आउँछ त्यसपछि बोलैला ।
कांग्रेसको नेतृत्वलाई प्रचण्डजीले औंलामा नचाइरहनु भएको छ । हाम्रो नेतृत्व प्रचण्डको तालमा नाचिरहने काम भएको छ । प्रचण्डजीलाई त फाइदा छ, उहाँको धर्म नै हो, तर नेपाली कांग्रेसले यो के गरेको ? नेपाली कांग्रेसले बुझनुपथ्र्याे नि । यसबाट कांग्रेसलाई बचाउनु पर्छ ।
काँग्रेसलाई बचाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा ?
जसरी गिरिजाबाबुले पहिला पहिला पूरा मुलुकलाई लिड गर्नुहुन्थ्यो । त्यसरी लिडगर्ने नेतृत्व चाहियो सबैभन्दा पहिला त कांग्रेसलाई बचाउनेहो भने । भिजनरी नेता चाहियो जसले फस्ट प्रायोरिटी यो देश अनि जनतालाई दिनु पर्यो । अनि मात्र अरु कुरा गर्ने हो । नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो नहुञ्जेलसम्म यो पार्टीले धेरै ठूलो क्षति हुनसक्छ । जनताले नबुझेको त छैन यो कुरा । यो सबैले बुझेको छ, मान्छेले नभनेको मात्रै हो, कोही नबोलेको मात्रै हो । मैले आज भनेँ, किन भनेको हुँ भने मलाई धेरै पीडा भयो । एकदम बोल्न नपाएर मनमा गुम्सेको कुरा कहिलेकाहिँ आउँछ नि । मलाई पनि त्यही भएको छ । जे गर्ने हो देशका लागि गर्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो । अब मलाई अरु केहीसित मतलब भएन ।
जुन ढंगले पार्टी चलिरहेको छ तपाईलाई चित्त बुझेको छैन ?
तपाईंले भनेजस्तो राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ला ?
पछिल्लो समय माओवादीसँग तालमेल गरेकोप्रति सकारात्मक सन्देश गएको छैन नि, होइन ?
यो एकदम नराम्रो, यसरी माओवादीसँग मिलेर हिंड्नु पर्ने कति कमजोर भएछौं त हामी ? एमालेलाई एक्ल्याउने, एमालेलाई सिध्याउने भन्या छ । एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो यो रणनीति ? यसले त एमाले बलियो हुन्छ । यसले नेपाली कांग्रेस सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले यति पनि बुझेको छैन ? यति त बुझ्नु पर्यो नि नेपाली कांग्रेसको नेताहरुले । यसरी कसलाई फाइदा भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु परेन ? माओवादीसँगको एकताले हामीलाई फाइदा हँुदैन । जसलाई सिध्याउन भनेर यो गरेको हो उसैलाई फाइदा भइरहेको छ । त्यति पनि नबुझ्नेले किन राजनीति गर्ने ? यति पनि सेन्स भएन भने, विवेक भएन भने किन यो राजनीति गर्ने ?
यसरी कांग्रेस टिक्छ ? कांग्रेसले यस्तै गरिरह्यो भनेदेखिन् यो चाहिँ नसोच्नु कि हामी नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिइराख्छौं । कांग्रेसले अर्कैको विचार बोकेर हिंडेपछि हामी साथ दिन्छौं ? दिदैनौ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने हामी प्रयास गरिरहेका छांै । कांग्रेसको विचारलाई छोड्ने र नेतृत्वमा बस्नेले यो नसोच्नु कि जसले यो गरिरहेको छ तिनीहरुले जे गरे पनि कांग्रेसलाई जनताले भोट हालिराख्छ । त्यो चाहिँ नसोचे हुन्छ, कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।
माओवादी र अरु पार्टीसँग तालमेल गर्दा पनि किन कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा दोस्रो बन्नु पर्यो ?
एमाले नसिध्याउञ्जेल कांग्रेससँग दीर्घकालीन तालमेल हुँदैछ भनेर अस्ती प्रचण्डले पनि भन्नुभयो, त्यस्तो होला र ?
प्रचण्डजीलाई म अन्डरस्ट्याण्ड गर्छु । उहाँलाई त फाईदा भईरहेको छ । उहाँलाई लागिरहेको छ कि उहाँले यसैगरी औंलामा नचाइरहनुभएको छ नेपाली कांग्रेसलाई । त्यो औंलामा घुम्ने चक्र हुन्छ नि, कांग्रेसको नेतृत्वलाई प्रचण्डजीले औंलामा नचाइरहनु भएको छ । हाम्रो नेतृत्व प्रचण्डको तालमा नाचिरहने काम भएको छ । प्रचण्डजीलाई त फाइदा छ, उहाँको धर्म नै हो, तर नेपाली कांग्रेसले के गरेको ? नेपाली कांग्रेसले बुझनुपथ्र्याे नि ।
अस्ती भारतीय टेलिभिजनमा त्यहाँका थिंकट्यांकको बहस थियो, उनीहरुले नेपालमा एमाले सिध्याउन काँग्रेस, माओवादी राजपाको गठबन्धन बलियो बनाएदिने कुरा आएको थियो । के राजनीति त्यहि दिशामा जान लागेको हो ?
यसरी बित्यो चन्द्रागिरिमा प्रधानमन्त्रीको ७ घण्टा
।।कविता अधिकारी।। मुस्किलले एक घण्टा समय निस्कने गाह्रो हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईतबारको दिनचर्या भने बेग्लै रह्यो । प्रधानमन्त्रीले आइतबारको आधा दिनको समय साहित्य कला प्रेमीहरुका लागि छुटयाउनुभयो ।
बजारमा रामहरी जोशीको प्रतिकात्मक प्रश्न
काठमाडौ, ३१ असार– स्वर्गीय नेता रामहरी जोशीको पुस्तक “प्रतिकात्मक प्रश्न” बजारमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मर्मस्पर्शी कविता : मरेपनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ
काठमाडौं, ३१ असार– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द्रागिरीको डाँडामा पुगेर हृदय स्पर्शी कविता लेख्नु भएको छ ।
कञ्चनपुर, २८ असार- भीमदत्त नगरपालिकालाई सूचना र प्रविधियुक्त नगरपालिका बनाउन दश वटा वडामा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा भएका भीनपाका–१९ मध्ये आधा भन्दा बढी वडामा इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको हो ।
काठमाडौँ, २० असार- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानून परिमार्जन गरी लगानी प्रर्वद्धन र प्रोत्साहन गर्दै जाने बताउनुभएको छ ।
धनगढी, २ साउन -न्यू आइटी भेञ्चर पब्लिक लिमिटेडले धनगढीलाई भ्यू टावरसहितको नमूना शहर (मोडेल टाउन)निर्माण गर्नेबारे अध्ययन शुरु गरेको छ ।
खोटाङ, १ साउन – दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३, नुनथलास्थित महुरेगढीमा आँखा आकारको पोखरी निर्माण गरिएको छ । हरेक वर्ष साउन २ गते ठूलो मेला लाग्ने महुरेगढीमा नगरपालिकाको रु ४३ लाख तथा स्थानीयको रु आठ लाख बराबरको जनश्रमदान गरी रु ५१ लाखको लागतमा पोखरी निर्माण गरिएको हो ।
नवलपरासी, ३१ असार - पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ बेलासपुरस्थित जालिम शाह बाबास्थलको मजार उचित व्यवस्था तथा प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ ।